Kacha mma N'onwe Gị maka anu ulo - Ikkaro
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ aka na ọ masịrị gị Mee N'onwe Gị ma ọ bụ na ị hụrụ n'anya iji aka gị eme ihe ma ị na-achọ iwube ngwa maka anụ ụlọ gị. Anyị na-ahapụ gị ndepụta nke Mee N'onwe Gị nke ị nwere ike ịme ihe dị egwu ma dị ọnụ ala maka ụmụ anụmanụ gị, ma ha bụ nnụnụ, nkịta, nwamba, azụ, ọkụkọ ma ọ bụ anụmanụ ọ bụla.
Anyị na-atụle ọtụtụ ọrụ dịka ihe mgbanye nri enwere ike iji maka nwamba, nkịta, ọkụkọ, wdg. Okike na mgbakọ na aquariums na akụkụ ha, wdg.
Na ihe na-atọ ụtọ, ọ bụghị naanị iji mepụta kamakwa iji gbanwee ma kpochapụ ihe ndị anyị nwere inye ha ndụ nke abụọ ma ọ bụ mee ka ha baa uru ma gbanwee maka mkpa nke anụ ụlọ anyị.
Ihe niile ụwa nke N'onwe Gị, ya na ngwaọrụ ya na usoro ya na ọrụ nke anụ ụlọ anyị. Anyị na-anwa mgbe niile na anyị nwere ike imegharị ihe ndị dị kwa ụbọchị. Lee ihe anyị nwere.
Ozugbo ngalaba ahụ malitere na olu, anyị ga-akpado ma kewaa nkuzi site na anụ ụlọ (nkịta, pusi, nnụnụ, azụ, ọkụkọ) na ụdị (ndị na-eri nri, ihe egwuregwu ụmụaka, wdg.) Ọ bụrụ na ịchọta ọkwa site na nsogbu ma ọ bụ nzacha ọzọ. akpali, gwa m na m kpọrọ ya.
Arụrụ ụlọ nnụnnụ nri
Ọnwa ole na ole gara aga, anyị bipụtara otu isiokwu gbasara -esi mee ka arụrụ n'ụlọ nnụnụ feeder.
Taa, anyị na-ewetara gị ụfọdụ ụdị maka ị nweta echiche ...
Otu esi eme ulo CO2 generator maka aquariums
Maka ndị niile nwere ma ọ bụ na-eche echiche ịtọlite ​​akwarium, ozi a ga-aba uru ;-)
Ọ bụ ihe -esi mee ulo CO2 generator maka aquariums.
A na-eji CO2 generator iji mee ka photosynthesis nke osisi mee ngwa ngwa, na-eme ka ha too ma mụta nwa ngwa ngwa, n'otu oge ahụ a na-eji ya dị ka onye na-ebelata PH.
Maka ọgbọ CO2 n'onwe ya, ọ bụ naanị shuga, yist nke anụ ahụ (a naghị atụ aro yist nke eze n'ihi na ọ nwere ụfọdụ ihe ndị mejupụtara kemịkalụ) na mmiri dị ọcha.
A na-eji nkwado karama Coca-Cola eme ihe nkwado.